Ny fizahan-tany Palestine dia namoy ny $ 1 lavitrisa $ noho ny areti-mandringana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Palestine » Ny fizahan-tany Palestine dia namoy ny $ 1 lavitrisa $ noho ny areti-mandringana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • Vaovao farany momba ny Palestine • People • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News
Na dia nanamaivana ny fepetra fitandremana sy ny fameperana amin'ny coronavirus aza ny governemanta Palestiniana, ary mamela ny sehatra rehetra hiasa ara-dalàna, ny sehatry ny fizahan-tany, indrindra ao Betlehema, dia mbola mijaly ihany.
Ny sehatry ny fizahan-tany any amin'ny faritany palestiniana dia miharatsy hatrany noho ny fihenan'ny COVID-19.
Ny 77.2 isan-jaton'ny vahinin-trano fandraisam-bahiny any West Bank dia Israeliana-Arabo, 22.5 isanjaton'ny Banky Andrefana ary mpitsidika 0.3 isan-jato fotsiny avy any ivelany.
Ny faritany palestiniana dia misy faritra roa miavaka: ny morontsiraka andrefana (anisan'izany i Jerosalema atsinanana) sy ny sisin'i Gaza.
Tatitra ofisialin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany Palestiniana, navoaka androany, dia nilaza fa ny sehatry ny fizahan-tany any Palestina dia namoy ny $ 1 Miliara hatramin'ny nipoiran'ny valanaretina coronavirus tany amin'ny Faritany Palestiniana.
Ny tatitra, navoakan'ny Birao foibe misahana ny statistikan'i Palestina sy ny minisiteran'ny fizahantany sy ny fahagolan-tany, dia nanampy fa miharatsy hatrany ny zava-bitan'ny sehatry ny fizahan-tany any Palestina noho ny COVID-19, indrindra fa ny tanànan'ny West Bank of Betlehema.
Araka ny tatitra, 77.2 isan-jaton'ny vahinin-trano fandraisam-bahiny ao amin'ny moron'ny West Bank dia Israeliana-Arabo, 22.5 isan-jato isan-jato ny olom-pirenena ary 0.3 isan-jato monja avy any ivelany.
"Na dia nanamora ny fepetra fisorohana sy ny fameperana amin'ny coronavirus aza ny governemanta Palestiniana, ary mamela ny sehatra rehetra hiasa ara-dalàna, ny sehatry ny fizahan-tany, indrindra ao Betlehema, dia mbola mijaly ihany," hoy ny tatitra.
The Palestiniana ahitana faritra roa miavaka: ny morontsiraka Andrefana (anisan'izany i Jerosalema Atsinanana) sy ny Lemak'i Gaza.
Fizahan-tany ao amin'ny Palestiniana dia fizahan-tany any East Jerusalem, West Bank, ary ny lemak'i Gaza. Tamin'ny 2010, 4.6 tapitrisa ny olona nitsidika ireo faritany palestiniana, raha ampitahaina amin'ny 2.6 tapitrisa tamin'ny taona 2009. 2.2 tapitrisa amin'ireo mpizahatany vahiny raha 2.7 tapitrisa kosa no ao an-trano.
Tamin'ny telovolana farany tamin'ny 2012, vahiny maherin'ny 150,000 no nijanona tao amin'ny hotely West Bank; 40% dia eropeana ary 9% dia avy any Etazonia sy Kanada. Ny mpitari-dia lehibe dia manoratra fa "ny morontsiraka Andrefana dia tsy ny toerana mora indrindra fivezivezena fa valisoa feno ny valisoa.
Ny minisitry ny Fizahantany Jamaika dia mirary fiononana ho an'ny fianakavian'ny...
Manana hafatra manan-danja ho an'ny UNWTO ny mpanjakan'i Espaina...